Badbaadada Hantida ee Badbaadada iyo Ilaalinta Maaliyadeed
Shirkadda Offshore.com waxay ka caawisay inay ilaaliso malaayiin doolar kumanaan macaamiil ah oo leh ilaalin dhaqaale oo birta ah. Waanu ku caawin karnaa.
Sababaha Looga Hortago Hantidaada
Ganacsi / Sharci
Dacwada shakhsi ahaaneed
Deyn-bixiyeyaasha aan sharciga waafaqsaneyn / sharci-darrada ah
Ilaali gurigaaga, Keydinta iyo Maalgashiyada
Waxaanu bixinnaa tiro dhawr ah oo ka mid ah adeegyada ilaalinta hantida oo ka kooban fudud iyo ammaan ah si adag oo adag. La-talin kasta oo bilaash ah waxay kuu keeni doontaa inaad hesho xal caadin ah oo ku haboon hantidaada iyo khatarta shakhsiyeed. Ma jiraan wax aad u yar oo la ilaaliyo.
Xeeladaha Ilaalinta Xirmooyinka 3
Samee Trust-ka Trust
Sameyso xisaab bangi caalami ah oo leh 100% sir ahaan
Ku bilaw shirkad furan ama shirkad xadidan oo xadidan ugu badnaan ilaalinta
Waxaan ballan-qaadeynaa inaan kula shaqeyno oo aan helno xalka ugu fiican ee suurtogalka ah si aan u ilaalino hantidaada qalabka aan la rabin. Wac ama soo buuxi foomka xiriirka ee boggan.
Samaynta Shirkadda Dibadda iyo Ilaalinta Hantida
Kaalinta hantida shirkadaha shidaalka iyo qaab dhismeedka sharci waxay ku siin karaan lakab xooggan oo ah ilaalin mustaqbalka ah. Qaar ka mid ah kuwa ugu qanisan iyo kan ugu sharci ahaan loo ilaaliyo ee adduunka ayaa odhanaya hal shay "waxba ma leh, wax walba xakamee." Markaad haysato xisaab bangi iyo hantiyo kale oo ay leedahay shirkaddaadu waxay kugu adkeyneysaa inaad raadsato hanti-yaqaan xirfadeed.
Shirkadda Shirkadda Offshore iyo Ilaalinta Sharciga
Haddii qof ka soo horjeeda sharciga ah uu raaco habdhaqan, tani waxay sida caadiga ah ku lug leedahay raadinta hantida si loo hubiyo in ay noqoto dib u noqosho waa in la helaa xukun. Haysashada hantida magaciisa ayaa si deg-deg ah loogu ogaan karaa raadinta diiwaanka sahlan. Sameynta shirkado dibadeed iyo hantida mulkiilaha ee shirkadda, waxay ka dhigan tahay inaysan ku xirnayn magacaaga. Sidaa darteed hantidaada waxaa laga ilaalin karaa kuwa ka soo horjeeda sharciga, garsoorayaasha iyo go'aaminta maxkamada si fudud oo ay kuugu dhejinayaan xeebaha.
Faa'iido kale oo aad ka faa'iideysan karto waa mid fudud. Badankoodda dhul-gariirka waxay u sahlanaataa qof kasta oo xiiseynaya in lagu daro. Shirkadda Offshore.com waa hoggaamiyaha adduunka ee ganacsiga dhul-bannaan. Waxaan ka caawineynaa istaraatiijiyadaada iyo horumarinta qorshaha badbaadinta hantida ee baahiyahaaga.